Q1: Ngaba uyakwamkela ulwenziwo?
A1: Ewe, Sineqela lethu lophando lobuchwephesha kunye neqela lophuhliso. Sinobuchule obaneleyo bokwenza uyilo kunye nokuvelisa umatshini kulwakhiwo lwenkqubo kunye nokusebenza kwenkqubo yokuhamba ngokweemfuno zabathengi.
Q2: Athini amagama akho okuhlawula?
I-A2: Imigaqo yokuhlawula: i-100% T / T kwangaphambili okanye i-100% yeL / C engenakuguqulwa kwibhanki yamanye amazwe eyamkelwe yi-SINOVO.
Q3: Iyintoni iwaranti yomenzi wakho?
I-A3: iinyanga ezili-12 ukusuka kuthumelo. Iwaranti igubungela iindawo eziphambili kunye namacandelo.
Ukuba isiphoso sethu kunye nesiphene kuyilo okanye ukwenziwa kwethu, siya kuthatha indawo yezinto eziphosakeleyo kwaye siya kuqinisekisa ngoncedo lobuchwephesha kwindawo ngaphandle kwentlawulo kumthengi (ngaphandle kwemisebenzi yesiko kunye nokuhamba ngaphakathi). Iwaranti ayiquki izinto ezinokusetyenziswa nezinxitywayo: iioyile, izibaso, iigaskethi, izibane, iintambo, iifyusi.
Q4: Zithini izinto zakho zokupakisha?
I-A4: Ukupakisha okuphuma kumazwe angaphandle, kulungele ukuthunyelwa kolwandle kunye nokuthunyelwa komoya
Q5: njani malunga nenkonzo yakho emva kwentengiso?
I-A5: Siya kuthumela injineli yenkonzo yobungcali kwindawo yokusebenzela, enikezela ngokugcina, ukuqeqesha ngenkonzo kunye nokwenza uvavanyo lokuqala lokomba; kwirigs efakwe phantsi kweCAT, umatshini wethu unokuyonwabela inkonzo yehlabathi kwinkonzo ye-CAT yendawo.
I-Q6: Nokuba unikezela ngomatshini osetyenzisiweyo?
I-A6: Ngokuqinisekileyo, sinemishini emininzi esetyenzisiweyo enemeko efanelekileyo yokusebenza kwintengiso.
I-Q7: kutheni le nto kufuneka uthenge kuthi hayi kwabanye abathengisi?
I-A7: (1) Ubungcali kunye nokuSebenza ngokufanelekileyo, ukuGxila kwabaThengi, ukuthembeka, ukusebenzisana ngokuphumelela;
(2) Ixabiso lokhuphiswano & ngaphakathi kwelona xesha lifutshane;
(3) Iinkonzo zobugcisa zaphesheya
Q8: Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuziswa?
I-A8: Ewe, sinovavanyo lwe-100% ngaphambi kokuziswa. Kwaye siya kuncamathisela ingxelo yethu yokuhlola kuwo wonke umatshini.
I-Q9: Ngaba unazo naziphi na izatifikethi zomatshini wakho?
I-A9: Zonke iimveliso zethu ziza kunye nezatifikethi ze-CE, i-ISO9001.
I-Q10: Ngaba ungathanda ukufumana iarhente yendawo?
I-A10: Ewe, sifumana iarhente yobungcali, ukuba unomdla, pls uqhakamshelwano ngokukhululekileyo nathi.